Global Voices teny Malagasy » Shina: ”Sakana maitso” mba hanivanana ireo solosaina manokana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Jolay 2018 9:38 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika (fr) i Suzanne Lehn, imanoela fifaliana
Sokajy: Shina, Fahalalahàna miteny, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Teknolojia
Araka ny Wall Street Journal tamin'ny 8 jona 2009, noteren'ny fanjakana ireo mpanamboatra solosaina manokana manerantany mba hampitao rindrambaiko fanivanana ireo PC aondrany ao Shina manomboka ny 1 Jolay.
Toa mampifandray ireo PC amin'ny angondrakitra iray avaozina matetika ahitàna ireo tranonkala voarara ary hanakana ny fidirana amin'ny adiresin'izy ireo ity rindrambaiko fantatra ihany koa amin'ny anarana ‘Green Dam-Youth Escort’ (‘Sakana maitso – Mpanaradia ho an'ny tanora’). Hanome ireo mpanivana avy ao amin'ny fitondrana ny fahafahana hanara-maso tsy mbola nisy toa azy ny fidiran'ireo Sinoa amin'ny aterineto ny fitaovana toy izany.
Manamafy reo manampahefana fa ny fiarovana ny tanora amin'ireo votoaty ”manimba” no tanjon'ity hetsika ity. Kanefa, milaza ireo tomponandraikitra vahiny amin'ity sehatrasa ity izay nanadihady ny Green Dam ity fa mety ho ampitain'ity rindrambaiko ity ny rakitra manokana sasany ary ho sarotra ho an'ny mpampiasa aterineto ny hahafantatra izay tena ho voasakana. Ary koa, mety hiteraka fivaonam-piasan'ireo solosaina manokana ao Shina ity rindrambaiko ity, ary hahatonga azy ireo ho marefo kokoa amin'ny fijirihana.
Hatramin'izao, milatsaka an-tsehatra ireo hetsika fanasivanana ny aterineto indrindra fa any anivon'ireo FAI, foibenà angondrakitra sy mpamatsy votoaty, afaka miditra amin'ny alàlan'ny proxy amin'ireo tranonkala voasakana ireo mpampiasa aterineto. Lasa fomba fanarahamaso vaovao ilay rindrambaiko ‘Green Dam’.
Ao amin'ny WSJ  [amin'ny teny sinoa] ireo vaovao feno.
Manome rohy (amin'ny Twitter) mankany amin'ny tranonkala ofisialin'ny ‘Green Dam-Youth Escort’ [amin'ny teny sinoa] izay ahafahana maka ilay rindrambaiko i Rebecca MacKinnon.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/29/123434/
 [amin'ny teny sinoa] izay ahafahana maka ilay rindrambaiko : http://www.lssw365.net/lvhang/index.php/List/index/pid/2